I-30,000 yeetoni zemveliso yemveliso yesichumiso semveliso - YiZheng Heavy Machinery Co., Ltd.
Umgca wemveliso yonyaka yeetoni ezingama-30,000 zezichumiso eziphilayo kukuguqula zonke iintlobo zenkunkuma yezinto eziphilayo zibe zizichumiso eziphilayo ngokweenkqubo ezahlukeneyo. Iifektri zezichumiso zezinto eziphilayo azikwazi ukujika nje umgquba wenkuku kunye nenkunkuma ibe bubutyebi, zivelise izibonelelo zoqoqosho, kodwa zinciphise nongcoliseko lokusingqongileyo kunye nokuvelisa izibonelelo zokusingqongileyo. Ubume beengqungquthela bunokuba yi-cylindrical okanye i-spherical, elula ukuthutha nokusetyenziswa. Isixhobo sinokukhethwa ngokweemfuno zakho zokwenyani.
Ifowuni: + 86-18621801335
Sibonelela ngenkqubo yoyilo kunye nokuveliswa komgca wokuvelisa umthamo wegranuc kwisichumiso sezinto eziphilayo. Izixhobo zomgca wokuvelisa ikakhulu zibandakanya i-hopper kunye ne-feeder, umatshini omtsha we-granulation, isomisi, umatshini we-roller sieve, ukuphakama kwebhakethi, ukuhambisa ibhanti, umatshini wokupakisha kunye nezinye izixhobo zoncediso.
Izichumisi zendalo zingenziwa ngentsalela yemethane, inkunkuma yezolimo, imfuyo kunye nomgquba weenkukhu kunye nenkunkuma kamasipala. Ezi nkunkuma zezinto eziphilayo zifuna ukwenziwa kwakhona ngaphambi kokuba ziguqulwe zibe zizichumiso zezinto eziphilayo ezithengiswayo. Utyalo-mali ekuguquleni inkunkuma ibe bubutyebi kufanelekile.
Ubutyebi bezinto eziphathekayo eziluhlaza
Izinto eziphilayo zezichumiso zendalo zityebile kwizixhobo, ezahlulwe ikakhulu kula macandelo alandelayo. Izinto ezahlukeneyo zinokudityaniswa nezixhobo ezahlukeneyo zemveliso:
1. Ilindle lezilwanyana: njengeenkuku, iihagu, amadada, iinkomo, iigusha, amahashe, imivundla, njl.
2. Inkunkuma yezolimo: istro straw, rattan, soybean meal, rapeseed meal, cottonseed meal, silk melon meal, yeast powder, yeast mushroom, njl.
3. Inkunkuma kwimizi-mveliso: i-slurry yewayini, intsalela yeviniga, intsalela yecassava, udaka lokucoca ulwelo, intsalela yamayeza, i-slag yendalo, njl.
4. Udaka lukaMasipala: udaka lomlambo, udaka, udaka lomsele, udaka lwaselwandle, udaka lwedike, i-humic acid, i-turf, i-lignite, udaka, uthuthu lwempukane, njl.
5. Inkunkuma yasekhaya: inkunkuma ekhitshini, njl.
6. Isichazi okanye isicatshulwa: isicatshulwa saselwandle, isicatshulwa sentlanzi, njl.
Itshati yokuhamba kwemigca yokuvelisa
1. Semi-emanzi isityumzi izinto isetyenziselwa ukwenza kube bhetyebhetye ngakumbi ukuba isiqulatho ukufuma izinto ekrwada.
2. Lo matshini ukutyabeka kwamasuntswana yenza isuntswana ubukhulu yamasuntswana ubukhulu, umphezulu egudileyo, namandla aphezulu. Ifanelekile ukunxibelelana neegranulators ezahlukeneyo.
3. Umgca wemveliso yonke uqhagamshelwe kukuhambisa ibhanti kunye nezinye izixhobo ezixhasayo.
4.Ubume beCompact, ukusebenza okuzinzileyo, ukusebenza okufanelekileyo kunye nokugcinwa.
5. Isixhobo sinokukhethwa ngokweemfuno zakho zokwenyani.
Inkqubo ibandakanya izixhobo zokuvumba, umxube, umatshini wegranulation, isomisi, ukupholisa, umatshini wokugaya, isilo, umatshini wokupakisha ngokuzenzekelayo, isityumzi esime nkqo, ibhanti yokuhambisa, njl.njl. Inkqubo yemveliso esisiseko yezichumiso eziphilayo kubandakanya: ukubila → ukuxuba izithako (ukuxubana nezinye izinto ze-organic-inorganic, NPK≥4%, izinto eziphilayo organic30%) → i-granulation → ukupakisha. Qaphela: le layini yemveliso yeyokujonga kuphela.
1. Isigubhu sedrum
Inkqubo yokubola iyabola ngokupheleleyo inkunkuma yendalo ibe kukuvumba kunye nokuvuthwa. Iiplagi ezahlukileyo ezinje ngeedumpers zokuhamba, iidumpers ezibini ze-helix, iiplagi ezinemigca, imithombo yokulahla inkunkuma ye-hydraulic kunye nokulahlwa kwenkunkuma okuveliswe yinkampani yethu kunokukhethwa ngokwezinto zokwenziwa komgquba, iindawo kunye neemveliso.
2. Umatshini otyumayo
Izinto eziluhlaza ezifakiweyo zingena kwisinyibilikisi esime nkqo, esinokuthi sityumle izinto ezingasetyenziswanga ezinomxholo wamanzi ongaphantsi kwe-30%. Ubungakanani beengqungquthela bunokufikelela kwii-odolo ezingama-20 ukuya ku-30, ezihlangabezana neemfuno zegranulation.
3. Umxhubi oxwesileyo
Emva kokutyunyuzwa, yongeza izinto ezincedisayo ngokomgaqo kunye nokudibanisa ngokulinganayo kwi-blender. Umxhubi oxwesileyo uneenketho ezimbini: umxube we-uniaxial kunye nomxube we-axis kabini.
4. Isikhewuli esitsha sesichumisi
Izinga lokuhluma elifanelekileyo kumatshini liphezulu njenge-90%, efanelekileyo kwiintlobo ezahlukeneyo zeefomyula. Amandla okunyanzelwa kwamasuntswana aphezulu kunalawo e-granulation yediski kunye ne-drum granulation, kwaye inqanaba elikhulu lokujikeleza lingaphantsi kwe-15%.
5. Umjikelo ophosayo
Umatshini wokujikeleza unokulungisa kunye nobuhle beengqokelela zegranulation emva kwegranulation. Emva kokukhupha i-granulation okanye inkqubo ye-granulation yenkqubo, emva kokuphosa ukujikeleza, amasuntswana esichumiso anokulingana ngobungakanani, ukujikeleza ngokuchanekileyo, okuqaqambileyo nokugudileyo kumphezulu, amandla amakhulu esuntswana, kunye nemveliso eyindilinga yesichumiso iphezulu njenge-98%.
6. Yomile kwaye ipholile
Isomisi esomeleleyo siqhubekeka ukumpompa umthombo wobushushu kwisitovu somoya esishushu kwindawo yempumlo ukuya kumsila we-injini ngokusebenzisa ifeni efakwe kumsila womatshini, ukwenzela ukuba umbandela unxibelelane ngokupheleleyo nomoya oshushu kwaye unciphise amanzi Umxholo wamasuntswana.
I-roller cooler iyapholisa amasuntswana kubushushu obuthile emva kokumisa, kwaye inciphisa umxholo wamanzi amasuntswana kwakhona ngelixa inciphisa ubushushu bamasuntswana.
7. Isihluzi se-roller
Isetyenziselwa ukwahlula iimveliso ezigqityiweyo kwizinto ezisetyenzisiweyo. Emva kokuhlanjululwa, amasuntswana afanelekileyo afakwa kumatshini wokutyabeka, kwaye amasuntswana angafanelekanga afakwa kwi-crusher ethe nkqo yokubuyisela kwakhona, ngaloo ndlela kufezekiswa ukuhlelwa kwemveliso kunye nokuhlelwa okufanayo kwemveliso egqityiweyo. Umatshini wamkela isikrini esidibeneyo, ekulula ukusigcina kunye nokutshintsha. Ubume bayo bulula, kulula ukusebenza kwaye bugudile. Ukuzinza, sisixhobo esibalulekileyo kwimveliso yesichumiso.
Ukutyabeka kwamasuntswana afanelekileyo ngokusebenzisa umatshini wokutyabeka ojikelezayo awenzi nje amasuntswana amahle, kodwa kuphucula nobulukhuni bamasuntswana. Umatshini wokujikeleza ukujikeleza usebenzisa ubuchwephesha bokutshiza ubuchwephesha kunye netekhnoloji yokutshiza umgubo ukuze kuthintelwe ukuthintela isichumisi.
9.Umatshini wokupakisha ngokuzenzekelayo:
Emva kokuba amasuntswana egutyungelwe, afakwa kumatshini wokupakisha. Umatshini wokupakisha unezinga eliphezulu lokuzenzekelayo, ukudibanisa ubunzima, umthungo, ukupakisha kunye nokuhamba, okuqonda ukupakisha okukhawulezayo kwaye kwenza inkqubo yokupakisha isebenze ngakumbi kwaye ichaneke.
Isithuthi sidlala indima ebalulekileyo kwinkqubo yemveliso, kuba idibanisa iinxalenye ezahlukeneyo zomgca wemveliso yonke. Kule layini yemveliso yezichumiso zemveliso, sikhetha ukukunika isihambisi sebhanti. Xa kuthelekiswa nezinye iintlobo zokuhambisa, iibhanti zokuhambisa zinogubungela olukhulu, zisenza ukuba inkqubo yakho yemveliso isebenze ngakumbi kwaye ibe noqoqosho.